La taliyaha iskuulka
Waa wadada ugu wanaagsan oo caawinaad u heli karto oo ah su'aallahaaga ku saabsan waxbarashada jaamacadda aad la taliyaha iskuulka aad kala hadasho. Haddii aad dhigato Swedish upper secondary school [dugsiga sare] ee (jimicsiga), la taliyaha iskuulka waxaad kala xiriiri kartaa iskuulkaaga. Ardayda wax ka barta dugsiga sare ee folk (folkhögskolan) ama barnaamijyada waxbarashada qaangaarka ee dowladda hoose ayaa sidoo kale waxay leeyihiin la taliye iskuul. Jaamacad iyo kulliyad jaamacad kasta ayaa sidoo kale leh adeegyada la talinta oo ay ardayda ugu talagaleen. Adeegyada "Jämfor utbildning" ee ku qoran studera.nu (af Swedish kaliya) waxaa ku qoran macluumaadka aad kula xiriiri karto adeegyada la taliyaha ee jaamacaddaha aad adigu danaynayso.